इनेप्लिज २०७२ असोज २९ गते २०:५७ मा प्रकाशित
“सरु” अर्थात् ‘सरला’, प्लेनमा बसेर माथिको उचाइबाट पहिलो पल्ट तलका दृश्यहरुको आनन्द लिन्छे। उसलाई सबै कुरा नौलो लाग्छन्। ऊ आफ्नो सपनाको शहरमा जाँदै छे। १२ कक्षा सक्दा सक्दै आफ्नी एउटी साथीको अष्ट्रेलिया-प्रस्थान देखे पछि ऊ पनि हान्निएर अमेरिकाको लागी आवेदन हाल्न पुगेकी थिई, फ्याट्ट भिसा पनि लागि हाल्यो। हो, पढाईको लागि ऊ अमेरिका उड्दै छे। तर यो उडाइ सँगै १२ कक्षा पछि कहाँ के गर्ने, के पढ्ने भनेर काठमाडौंका सडक, पार्क र गल्लीहरुमा हिँड्दा कमल सँग बनाएका सबै योजनाहरु पनि उडेर गए। सुन्दर ठाउँको मिठो कल्पनामा मस्त उसका मनमा अनेकौ तर्कनाहरु खेल्दा खेल्दै ऊ न्युयोर्क आइपुग्छे। चञ्चल स्वाभावकी ऊ अलि महत्वाकांक्षी पनि छे। अमेरिकामा पहिलो पाइला हाल्दाको फोटो खिच्न नपाएकोमा उसलाई खेद भईरहन्छ। काठमाडौंको खाल्डो बहिरको संसार कै अस्थित्वबोध नभएकी सरला यति विशाल ठाउँमा आउन पाउँदा उसको जमिनमा खुट्टा रहन्न। अब ऊ खुला आकाशमा स्वतन्त्र पंछी सरी उड्न चाहन्छे। दु:खम-सुखम पहिलो सेमेस्टरमा होस्टेललाई समेत पुग्ने गरी पैसा नेपाल बाटै ल्याएकोले तत्कालै काम खोज्ने चिन्ता पनि भएन। यहाँ यो गर/ऊ गर, यसो गर्न हुन्छ/यसो गर्न हुँदैन भनीरहने पनि कोही नभएकोले उसलाई स्वच्छन्द विचरण गर्ने अवसर मिल्छ। अमेरिकामा ऊ वास्तब मै स्वतन्त्र भई।
अमेरिका, अनि त्यस माथि न्युयोर्क शहर। त्यहाँको भब्यता, फराकिला बाटा-घाटा, गगन चुम्ने भवनहरु, अनि त्यहाँको समृद्धि र शहरीकरण देख्दा ऊ आँफु कुन दुनियाँमा छु भन्ने आँफैलाई पत्तो थिएन। त्यहाँका तिनै गगन मण्डलमा ऊ स्वतन्त्र पंछी झैँ उडेर आनन्दभूती प्राप्त गर्न चाहन्थी। आईफोन बोक्ने धोको आउँदा-आउँदैको पहिलो शपिङ मै पुरा गरी। उसलाई फोटो लिन तथा सामाजिक सन्जालमा झुन्डिइरहन अझ सजिलो भईदियो। तीनै सामाजिक सन्जालमा विचरण गर्दै गर्दा अनायासै कतै पोस्ट देख्छे- “बाँदर लड्ने भीरमा डोको बोकेर हिँड्ने केटीहरु विदेशमा साम्सुङ र आइफोन बोकी हिँड्छन्।” उसले काठमाडौंमा डोको त पक्कै बोकिन होली, तर त्यो व्यंग्य मिश्रीत लेखाइले कता-कता काउकुती लगाए झैँ भने पक्कै भयो। फोन बाट ऊ आँखा हटाउछे, पुर्लुक्क माथि हेर्छे अनि मुसुक्क मुस्कुराउछे। आफ्नो एउटा फोटो पनि लिई हाल्छे। रातो लाली दलेको मुख चोसो पारेर टाईम्स-इस्क्वायर अगाडि खिँचेको त्यो फोटोले फेसबुकमा तहल्का पिट्छ। भोको ब्वाँसो झैं कुरेर बसेका फेसबुके साथीहरु, बिशेषत: भाले प्रजाती ह्वार्र आईपुग्छन्, वाह-वाह गर्न। ऊ हौँसिदै जान्छे। तर उसको त्यो स्वतन्त्रताको आवरणमा भने कमल रमाउन सकेन। टाईम्स इस्क्वायरको त्यो फोटोमा वाह-वाह गर्नेको पंक्तीमा उसको अनुपस्थिती थियो। उसले सरलाका हरेक फोटाहरुमा आफ्नो अनुपस्थिति मात्र देख्दथ्यो। तसर्थ उसका यस्ता कुराहरु कमललाई “कागलाई बेल हर्ष न बिस्मात” पर्याय हुँदै गए। तर जे जसो भए पनि, दूरी-अन्तरका बावजुद पनि ऊ सरला प्रतिको प्रेम एक रत्ती पनि कम हुन दिन्न भन्ने अठोटका साथ बस्तथ्यो। यसर्थ कमल आधुनिक युगको रोमियो भन्दा कम थिएन, तर उसकी सरुलाई अमेरिकाको हावा मज्जाले चढ्दै छ भन्ने कुराले ऊ चिन्तित हुन थाल्यो। परिवर्तन प्राकृतिक हो, सबैमा आउँछ, तर सरलामा देखिएको परिवर्तनको गती चाँही अली रफ्तार नै थियो। बिदेशी भूमि, बिदेशी मानिसको भिड, त्यमा पनि सेता पुतलीका अलग्गै भिड –हो ऊ त्यही भिडमा मिसिन चाहन्थी।
यता त्यो देखे पछि कमल हाँगाबाट खसे झैँ भयो। त्यसो त उसको फोन र म्यासेजको प्रतिउत्तर आउन पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको थियो। दुई जनाको कचकचमा सरलाको थर्काइ खाएको पनि धेरै भएको थिएन। उसले रीसाउँदै भनेकी थिई- डिस्टेन्स लभ पनि कहीँ सक्सेस हुन्छ? बिरुले आँफुलाई बेसाहारा ठान्यो, प्रेम-पीढाले प्रताडित हुन थाल्यो। त्यस पछि उसका कैयौ प्रश्नका जवाफ आएनन्, आई नै हाले पनि ठाडो, रुखो र टर्रो स्वादमा आउन लागे। उसका रातहरु प्राय: अनिदो भई बित्न थाले। एकान्त र बिरहका गीतहरु प्रीय हुन लागे, उनै गीतले मोबाईल भरिए अनि उसलाई तिनै अँध्यारा निर्जन रातहरुमा साथ दिन थाले। ऊ गीत दोहोर्याई- टेहेर्याई सुन्दथ्यो, आँफै पनि गाउँदथ्यो। उसको यस्तै अवस्थाका संकेतहरु सरलाले फाट्ट-फुट्ट फेकेबूकमा देख्दथी, तर मौन रहन्थी।
कमल! म सँग रिसाएका छौ होला, हैन?
मेरो याद आउछ?
[लेखक: हाल टेक्सस् स्थित साउथ-वेस्ट एयरलाइन्समा इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत]
Follow the [email protected] Facebook.com/PitambarPandeyOfficial